Fitantanam-panjakana: Andry Rajoelina any Sotchi (Rosia), Ntsay Christian atsy La Réunion
mercredi, 23 octobre 2019 22:12
Milamina i Madagasikara ! Izay no azo andikana ny tsy maha eto an-toerana amin’ny fotoana miaraka ireo lehiben’ny andrimpanjakana mpanatanteraka, mpitantana ny firenena.
Niainga omaly, miatrika ny fihaonana antampony Rosia-Afrika tanterahina any Sotchi, ny 23 sy 24 oktobra, ny filoha Andry Rajoelina ; niazo ny Nosy La Réunion androany alarobia 23 oktobra ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian. Raha ny loharanom-baovao dia hihaona amin’ny filoha frantsay Emmanuel Macron, izay manao fitsidihana ao La Réunion i Ntsay Christian, ary mety hiresaka momba ireo nosy manodidina na « iles éparses ». Ny alakamisy 24 oktobra no hitodi-doha eto Madagasikara ny praiminisitra.
Avy tao amin’ny nosikely Glorieuses, iray amin'ireo nosikely mandrafitra ny « iles éparses » i Emmanuel Macron androany, ary teny isany nanamarika ny diany tao, notaterin’ireo fampielezam-baovao frantsay ny nilazany fa « Ici c'est la France ».
Nanaitra ny ankamaroan’ny Malagasy io vaovao io androany, nisy aza nisendaotra mihitsy ; nisy rahateo ny fiandohan’ny volana mey 2019, raha nitsidika ofisialy tany Frantsa ny filoha malagasy Andry Rajoelina, ny filazana ny hananganana voamiera itambaran’i Frantsa sy Madagasikara hijerena ny hamerenana amin’i Madagasikara ireo nosy manodidina na ny hiaraha-mitantana azy, ka andraisana fanapahan-kevitra alohan'ny fankalazana ny faha 60 taona niverenan'ny fahaleovan-tena amin'ny 26 jona 2020.